Daalụ-for maka Nghọta Taa, Indy! | Martech Zone
Na Febụwarị m dọtara ụfọdụ abalị na ngwụsị izu mgbe m wepụtara onwe anyị Kọmitii Superbowl 2012. Pat Coyle kpọrọ m oku mgbe ọ na-arị elu na enwere m ike ịnọ n'ụgbọ wee nye nduzi ụfọdụ (na obere mmepe) iji gbakọta ọnụ elekọta mmadụ na mgbasa ozi ọchụchọ nke ahụ ga - enweta aha Indianapolis na web niile dị ka obodo ịhọrọ.
Ejikọtara saịtị ahụ na ọdịnaya niile edere na weebụ yana site na saịtị mgbasa ozi mpaghara iji mee ka ndị bi na Indy ruo oge na ọganihu nke ọrụ ahụ. Ọ bụ nnukwu ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na otu egwuregwu dị egwu Mark Miles duziri. Onye ọ bụla kewara wee merie… anyị mere ya! Mark bu otu ndi ndu - o maara otu esi achikota ndi otu, wepu ihe mgbochi inwe oganihu, ma nye ndi nke ya ike inweta oru a.
Taa, m natara a mara mma ihe ncheta si Michael Karnuta, Vice President of Business Development for the Sportslọ Ọrụ Egwuregwu Indiana maka enyemaka m nyere. Ihe ncheta nwere n'ezie ezigbo ibe nke RCA Dome na ya, kwa jụụ!
Ọ bụrụ na ịmaghị Indiana Sports Corporation na ị bi ebe a, ịkwesịrị onwe sonye nzukọ ahụ ma nweta gị ụlọ ọrụ gị iji nweta otu, kwa! Anyị nwere ọtụtụ ihe na-abịa Indianapolis n'afọ iri na-abịanụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi na mpaghara ahụ ma nweta nnukwu mmata - nke a bụ otu ịbanye!
Sportslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Egwuregwu Indiana
Ndị otu ndị otu egwuregwu Indiana Sports Corporation na-eje ozi dị ka ihe na-akpali akpali na-adọta nnukwu ihe omume na Indiana ma na-enye ndị ntorobịa anyị ohere pụrụ iche. Onyinye ụtụ gị na-esokwa n'ọtụtụ elele. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ndị otu ISC, biko kpọtụrụ Mike Pruzin na member@indianasportscorp.com ma ọ bụ (317) 237-5020.
Special ekele Michael na-ewepụta oge taa ịhụ m. Mike ji obi oma gosiputa ekele ya nye m maka mgbali, ogbugbu na ochichi m na-aga n'ihu na-akwalite mpaghara a. Ọ tụbara n'ime akpa osisi osisi maka ịmị barbecu iji gosipụta mmetụta m nwere ịmụnye ọkụ n'okpuru oru ngo. Enwere m obi ụtọ na m na-ekere òkè n'inweta Superbowl (ejiri n'aka… Peyton na Irsay nwere ike nyere aka, kwa) ma nwee ekele maka ọbụbụenyi mụ na Pat Coyle na-emeghere ohere ndị a.
Ana m atụ anya iso Michael na ndị isi ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike iji weta nnukwu egwuregwu na mpaghara ahụ! Maka ndị gị na mpụga Indianapolis - Achọghị m ịwụfu obodo anyị, mana ọ bụ nnukwu obodo nwere ụdị azụmahịa ejikọtara ọnụ. Ebe ọzọ ka ị nwere ike wepụta ma wụpụ iji nyere aka nweta Superbowl?!
Tags: 2012 nnukwu efereIndiaakara kilomitaotu domennukwu efere na-elekọta mmadụ mediasuperbowl
Wepụta $ 299 ma nyefee saịtị gị na Yahoo?
Mmekọrịta Ndị Ahịa na Ndụ na Ndụ
Jun 14, 2009 na 9:30 AM
Ekele. Obodo a nwere ihu ọma inwe gị!